Madaxweynihii ugu horreeyay Dalka Iiraan, Abolhassan Banisadr, oo ku dhintay Paris
HomeWararka CaalamkaMadaxweynihii ugu horreeyay Dalka Iiraan, Abolhassan Banisadr, oo ku dhintay Paris
October 10, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Abolhassan Banisadr, oo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Iiraan ka dib kacdoonkii dalka 1979, ayaa ku dhintay Paris, halkaas oo uu ku noolaa muddo tobanaan sano ah kadib markii uu ka soo qaxay dalkiisa.
Bayaan uu soo saaray boggiisa internetka iyo warar ay baahiyeen warbaahinta Iran Sabtidii ayaa lagu sheegay in 88-jirka uu geeriyooday “ka dib markii uu muddo dheer ku xanuunsanaa” isbitaalka Salpêtrière ee caasimadda Faransiiska.
Banisadr wuxuu ku dhashay 1933 gobolka Hamedan ee galbeedka Iran. Aabihiis wuxuu ahaa hoggaamiye diineed oo caan ah oo saaxiib la ahaa Ruhollah Khomeini, oo si guul leh u hoggaamiyay kacaankii Islaamka ee ka dhanka ahaa Mohammad Reza Pahlavi, shahkii ugu dambeeyay ee Iiraan.
Banisadr, oo waxbarashadiisii ​​ku dhammaystay Yurub, wuxuu ahaa nin u ololeeya kahortagga xukunka boqortooyo ee shah. Waxa uu noqday qof ay isku kalsoon yihiin oo ay saaxiib dhow yihiin Khomeini.